Kwuo eziokwu maka ụmụagbọghọ Chibọk- Jonatan na-agwa Shetima – hoo!haa!!
Site n’aka Mba Udogu
Shetima na Jonatan
Onye bubu Onyeisiala, Gudlọk Jonatan nọrọ ụnyahụ cheere Aka na-achị Boronu Steeti bụ Kashim Shetima aka mgba ka ọ gwa ụwa eziokwu banyere etu aka ya si dị na ntọrọ atọrọ ụmụ agbọghọ Chibok .
N’ozi sitere n’aka onye na-ekwuchitere ya, Ikechukwu Eze, izaghachi Shetima maka ihe o kwuru na mmemme iweputa akwụkwọ ọhụrụ nke Bolaji Abdullahi bụ ọnụ na-ekwuru otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressives Congress (APC) dere, e mere n’Abụja n’ụbọchị Tọọzdee, onye ahụ na-ekwuchitere Jonatan sịrị: Okwu Shetima atụghị anyị n’anya ebe anyị ma mbọ ọ gbara ịbụ ọgbatuhie nye agha ọchịchị pụrụ apụ na-ebuso Boko Haram na Steeti ya.
“Ya gwa anyị ma ọ bụ Jonatan mere ka o mee ka ụmụ akwụkwọ ụlọ-akwụkwọ ahụ bụ Government Girls Secondary School na Chibok babanye n’ime ihe ize ndụ, na nnupu isi nye ntuzi aka Gọọmentị Etiti nye ndi Gọvanọ nọgasị na steeti atọ ebe ahụ Boko Haram na-akpa ike ka ha buga ụmụakwụkwọ na-elele ule akwụkwọ WASC n’akụkụ ebe ihe ize ndụ adịghị.
“Ebobeghi Gọvanọ a ebubo, ọ malite ịgọ n’aka ya dị ọcha banyere ntọrọ ụmụ agbọghọ Chibọk. Anyị a ga-echefukwu etu o siri bulie onyeisi ụlọakwụkwọ ahụ na Chibọk, onye gbaghapụrụ ụmụakwụkwọ ya n’abalị ahụ ndi agha oyi ọha egwu wakporo ụlọ akwụkwọ ahụ site na imezi ya Kọmishọna, iji gosi na “ikpe mara eziokwu, n’aka azụ dị ya” ?
Jonatan jikwara ọnụ pịa ndi na-akatọ ọchịchị ya ụtalị di egwu, ma gakwaa n’ihu kwuo na ọchịchị nọ ugbua ahụbeghị azụ ọchịchị ya anya n’ihe ha meputara.
Ozi ahụ kọwakwara akwụkwọ ọhụrụ ahụ nke a kpọrọ; ‘On a Platter of Gold- How Jonathan won and lost Nigeria” n’asụsụ bekee dịka nke juputara na sọọsọ okwu ụgha nakwa asịrị nke onye dere ya bụ onye iwe ka na -ewe maka mwepu e wepuru ya dịka Mịnịsta n’oge ọchịchị Jonatan.
Previous Post: Maina: Mịnịstrị na-ahụ maka okwu ala anyị enwetaghị ikike n’aka m – Oyo-Ita
Next Post: ỌGỤ ARỌ ỌNWA DISEMBA AFỌ 2017